Ads Manager App: mari-pandrefesana rehetra ao amin'ny 1 App | Fampidinana maimaim-poana
Ny Digital Marketing fanentanana amin'ny toerana iray.
Clever Ads Mobile App amin'ny ankapobeny dia mpitantana doka ho an'ny orinasanao. Hahafahanao mijery sy mitantana ny fampielezana Google Ads , Facebook Ads, Instagram Ads, Microsoft Ads ary Twitter Ads. Makà tatitra 360º momba ny zava-bitan'ny fampielezan-kevitrao. Atsaharo ny mitsambikina avy amin'ny sehatra iray mankany amin'ny iray hafa, mahazoa fampitahana feno amin'ny findainao. Ny fitantanana doka toa tsy mbola hitanao hatrizay!
Inona no hamonjy
Jereo ny zava-bitan'ny fampielezan-kevitra Google Ads
ads ara-tsosialy ataonao amin'ny sehatra roa!
Jereo ny zava-bitan'ny Ads
Jereo ny ads amin'ny Twitter.
Track fanatanterahana ny sehatra nomerika-barotra
Vokatry fepetra miorina amin'ny fampielezan-kevitra teo aloha.
fanatsarana ny fampielezan-kevitra
Ampiasao toro-hevitra manokana fampielezan-kevitra mba hanatsarana ny vokatra.
Tatitra momba ny Advanced Ads
Reraka avy amin'ny fitraitraiky ny avy amin'ny sehatra iray hafa?
Jereo daholo ny fanentanana momba ny varotra dizitaly amin'ny alàlan'ny teknolojia anay, na amin'ny fampitahana ny tontonana. Esory ny fomba fijery rehetra amin'ny alàlan'ny toro-hevitray manokana hahatongavana amin'ny fanatsarana tanteraka. Ads fitantanana doka amin'ny tsara indrindra!
User-namana interface tsara
Inona ny mpanjifa milaza
"Fampitahana haingana ireo ads nataoko. Mahazo ny fahana rehetra ilaina aho mba hananako fahatakarana mazava amin'ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra. Tsy isalasalana fa ny ads tsara indrindra efa nandramako!"
"I miasa amin'ny Mandehana, ka io no nanao fampielezan-kevitra fampiharana fanadihadiana sy ny fampitahana faran'izay mahomby sy tsy misy manahirana. Tsy hisy intsony ny fitrandrahana ala an kaonty samihafa mba hanamarina!"
"Mora ampiasaina! Nampidiriko ny Facebook-ko sy ny Google Ads kaonty ary fantatro izao hoe inona ny fampielezan-kevitra mety tsara sy manova ny fiovam-po ho vola. Metrika dia mahagaga!"
Misimisy kokoa momba ny Clever Ads Manager
Mitantana, manatsara ary mamorona ny Google Ads , Facebook Ads, Microsoft Ads, Instagram Ads, &amp; Twitter Ads anao eny an-dalana.
INONA NO ISIKA Hateriko aminao sy ny raharaham-barotra
Tombontsoa, ​​tombontsoa sy ny endri-javatra manan-danja
Leo ny mitsambikina avy amin'ny sehatra dokambarotra iray mankany amin'ny iray hafa hijerena sy hamakafaka ny angon-drakitrao? Tantano amin'ny toerana iray ny Google Ads , Facebook Ads, Microsoft Ads, Ads Instagram anao, ary tsy misy mora izany! Amin'izany dia afaka mifehy ny paikadinao amin'ny doka ianao ary mandrefy tsara kokoa ny valiny amin'ny alàlan'ny fananana ny refy rehetra amin'ny fampielezankevitra amin'ny findainao na amin'ny fitaovana tianao indrindra, ao anaty kiheba tokana.
Clever Ads Manager no tsara indrindra (eny, mamaky izany ianao, fampiharana maimaim-poana) ho an'ny Google Ads , Facebook Ads, Instagram Ads, Twitter Ads, ary Microsoft Ads. Mamorona, manatsara ary "manery" faran'izay betsaka amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny doka an-tserasera rehefa mandeha sy mivoaka miaraka amin'ny Clever Ads Manager. Makà audit 360 ° amin'ny zava-bita sy ny fivoaran'ny fampielezan-kevitrao mba hampisehoana ny fomba fampisehoana ny dokanao amin'ny fampitahana ny sehatra rehetra. Ny angonao rehetra, ao anaty boaty iray, na aiza na aiza no tadiavinao, na izany aza tianao. Mety hihatsara ve?
Endri-javatra manan-danja dia hahazo
Check your main metrics (spend, revenue, conversions and CPA, among others) on all advertising platforms where you are present: Google, Facebook, Microsoft, Instagram and Twitter, and be able to compare them easily. Have all your ad data and KPIs organized in fully customizable charts and graphs anao, misafidy izay tianao ho jerena ianao, amin'ny fotoana rehetra, na aiza na aiza. Mahazoa fahitana feno ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra doka nataonao indray mipy maso fa tsy mila miala toerana iray.
Famoronana kaonty Google Ads : Inona izany? Tsy mbola manana Google Ads ianao? Tsy misy olana, hamboarinay ho anao amin'ny tsindry roa (eny, maimaim-poana koa). Ary hampiasa Google Ads izahay hanombohana dokam-barotra amin'ny Google maimaimpoana! Hatramin'ny 120 USD Google Ads coupon maimaim-poana!
Mpanangana fampielezan-kevitra amin'ny Google Ads : Araka ny efa nolazainay, dia mikarakara ny famoronana ny Google Ads ary mampiseho fampielezan-kevitra amin'ny dingana 4 mora ahafahanao manomboka manao doka amin'ny Google amin'ny indray mipy maso.
Google Ads sy simulator momba ny teti-bola : Mbola tsy azonao antoka raha te hanomboka doka ianao? Jereo hoe ohatrinona ny vidinao raha mahatratra ny mpihaino kendrenao amin'ny alàlan'ny dokambarotra Google ary mandray fanapahan-kevitra tsara.
Hatsarao ny Google Ads , Facebook Ads, Instagram Ads ary Microsoft Ads misy customized tips and tricks mba hanatsarana ny fanatsarana sy ny fahombiazan'ny doka. Ny Ads Manager tsara indrindra amin'ny indostria, maimaimpoana ary natokana ho azy.
Fomba fanao tsara indrindra dia ny fahazoan-dalana
Ahoana no ahazoana mampiasa betsaka indrindra avy amin'ny Clever Ads Manager?
Ny Google Ads Manager anay dia mety ho fanentanana amin'ny varotra an-tserasera sy mpiara-miombon'antoka amin'ny doka. Mampifandray sehatra dokam-barotra marobe araka izay tianao hanana fahitana feno momba ny paikadim-barotra sy ny varotra nomerika: ataovy Google Ads , Facebook Ads, Instagram Ads, Twitter Ads, ary Microsoft Ads, voafehy tanteraka ao anaty dashboard voatokana tanteraka. . Ary tsarovy, MAIMAIMPOANA!
Ampitahao ny zava-bitanao eo amin'ireo sehatra fanaovana dokam-barotra isan-karazany ary balance your budget and spend based on your campaign performance . Nahazo fiovam-po bebe kokoa noho ny Ads Facebook ve ny Google Ads Ny Ads Instagram ve dia mitatitra CPA avo kokoa noho ny Microsoft Ads? Iza amin'ireo fampielezan-kevitra iza no mahomby kokoa mba hanerena azy ireo? Tsy maintsy ajanoko ve ny sasany satria tsy mahomby izy ireo?
Ampitomboy ny paikadinao sy ny varotrao amin'ny alàlan'ny fananganana ny Google Ads sy ny fanentanana tsy misy anao amin'ny alàlan'ny toro-hevitra sy ny tabilao manokana. Mitadiava mpihaino vaovao sy mety ho mpanjifa izay tsy noeritreretinao akory ary ampitao amin'ny alàlan'ny Internet izy ireo, amin'ny alàlanay fanampiana dia tsy ho sarotra be izany. Ho fanampin'izay, araraoty ny fanairana anay ary aza hadino izay zavatra mitranga amin'ny fampielezan-kevitrao sy doka. Amin'ireto fampandrenesana ireto dia ho hitanao ny zava-mitranga tsy ampoizina rehetra, ary raha misy zavatra tsy mahazatra hitranga amin'ny fampielezan-kevitrao ... hampitandrina anao ny fanairana anay!
Ataovy havaozina sy havaozina hatrany ny doka fanaovan-doka ataonao amin'ny alàlan'ny fampiharana ny torohevitra sy tolo-kevitry ny Ads Manager anay. Aza mandany ny teti-bolanao amin'ny fanaovana doka., Mitsitsia fotoana sy vola ary mahazoa fiadan-tsaina.
Ads : ataonay MAIMAIMPOANA ny fampielezan-kevitrao
Tsy manana kaonty Google Ads Tsy fantatrao hoe aiza no hanombohana? Raha manana fisalasalana amin'ity karazana ity ianao ary / na voafetra ny teti-bolanao ... Ny Ads Manager anay sy ireo fitaovana hafa dia natao ho anao, zahao fotsiny! Tianay ny manampy anao amin'ny fahaizanay amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny Google, mamorona sy manatsara azy ireo (maimaimpoana tanteraka) ho anao.
Miaraka amin'ny fanampianay dia azonao atao ny mamorona ny Google Ads amin'ny alàlan'ny Clever Ads Manager ary mifanaraka amin'ny fenitra Google rehetra. Mandehana fotsiny amin'ny dingana 4 izay hanontanianay anao fanontaniana vitsivitsy: ny orinasanao, ny kaontinao, ny mombamomba ny mpihaino kendrenao, ny tolotra omena anao, ny serivisinao ary ny teti-bola isan'andro tadiavinao amin'ny doka ... Ary izahay dia miala mandehana!
Maimaimpoana 100% ny mpanao doka ataonay ary ny teti-bola nofidinao dia holaniana amin'ny tsindry azonao avy amin'ny fampisehoana ny ads ao amin'ny Google, tsy mitahiry denaria izahay. Ho fanampin'izay, raha vaovao amin'ny Google Ads dia manana fihenam-bidy voalohany $ 120 USD (miankina amin'ny volan'ny firenenao) izay hoentina ho kaody fampiroboroboana ao amin'ny kaontinao mba hahafahanao manomboka manao doka amin'ny Google maimaim-poana. Tsy misy fika sy azo antoka 100%! Mpiara-miasa Google Premier izahay, ka tsy mila miahiahy na inona na inona ianao, mampanantena izahay. Ary raha manana fanontaniana na ahiahy ianao dia afaka mifandray aminay foana ianao ary ireo Google Ads (mpitantana ny kaontinay) dia faly manampy anao sy manampy anao amin'ny zavatra rehetra ilainao.
Avelao hamorona azy amin'ny alàlan'ny Clever Ads Manager ny Google Ads Handalo dingana 3 ianao izay hanontanianay anao ny momba ny mpihaino tadiavinao lasibatra, ny fanolorana anao, ny serivisinao ary ny teti-bolanao isan'andro tianao holaniana amin'ny doka nataonao.
ads ataonay ary ny teti-bolanao voafidy dia holaniana amin'ny tsindry azonao rehefa mampiseho ny ads ao amin'i Google. Raha vaovao amin'ny Google Ads , Clever Ads ka manomboka manao dokambarotra maimaim-poana amin'ny Google ianao.
Fanatsarana ny Ads
Clever Ads Manager dia milaza aminao izay tena tsy ampy na tsy mahomby amin'ny Google Ads , Facebook Ads, Instagram Ads, ary Microsoft Ads anao.
Handray torohevitra vonona hampiasaina amin'ny zavatra tokony hataonao ihany koa ianao amin'ny fanatsarana ny fahombiazanao amin'ireo sehatra dokam-barotra samihafa. Clever Ads Manager dia manampy anao hampitombo ny fahombiazanao amin'ny tsindry iray monja.
Hifehy sy manatsara ny vokatra.
Hitantana ny fampielezan-kevitra amin'ny Clever Ads Mobile App maimaim-poana! Apetraho amin'ny Android sy iOS ity.